Imifino engu-8 ukuhlala ilungele ikhishi lethu | Ukuvuselelwa Okuhlaza
Imifino engu-8 engakhula ibuye ngokulandelana
UManuel Ramirez | | Ezolimo zemvelo, I-Ecology
Besivele siphawula ngawe inkinga yokungcola kwenhlabathi nokuthi izindawo ezithile zehlisa isithunzi kanjani singanakile ngenxa yezimo ezahlukahlukene, sikwazi ukuguqula iziza lokho kwakulungele ukukhula kwezinye ukuthi akunakwenzeka ukutshala okuthile kuzo.
Namuhla sikulethela imifino engu-8 ukuthi bangaphinde bakhule kaningi ngendlela abafuna ngayo njenge-chives, u-garlic, iklabishi lamaShayina, izaqathe, i-basil, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, ulethisi waseRoma noma i-endive, ne-coriander. Amathuba ayisishiyagalombili okuthola lolu hlobo lwezithako njalo ekhishini lethu futhi esivumela ukuthi singanciki kakhulu enhlabathini lapho sizotshala khona. Ngesitsha sembali noma isitsha esinamanzi singaba naso noma nini lapho sifuna ngaphandle kokuchitha noma yini ukuwathenga esitolo.
3 Iklabishi lamaShayina
7 I-Romaine ulethisi noma i-endive
AmaChives angakhula futhi kushiya isiqu esisikiwe cishe amasentimitha ayi-1 noma ama-2 empandeni ukuwabeka engilazini encane yamanzi ewamboza njengoba ubona esithombeni.
Lapho ugalikhi eqala ukuhluma amathiphu aluhlaza, angaba njalo faka indishi yengilazi enamanzi amancane. Amahlumela anephunga elimnandi kunegalikhi futhi angafakwa kumasaladi, izitsha nakwezinye izinhlobo zokupheka.
Iklabishi lamaShayina lingakhula futhi ngokukufaka esitsheni esincane ukubeka impande ezansi ngamanzi. Kumaviki awu-1 kuya kwayi-2, ingafakwa futhi ebhodweni elinenhlabathi ukuze kukhule ikhanda elisha leklabishi.
Phezulu kwesanqante kungafakwa kupuleti elinamanzi amancane. Beka ipuleti onqenqemeni lwewindi noma endaweni ekhanyiswe kahle, futhi uzoba namaqabunga azophuma kukaloti ukwazi ukuyisebenzisa ezinqoleni
Beka amaqabunga amaningi we-basil ngaphezulu noma ngaphansi 3-4 amasentimitha lilinye engilazini yamanzi bese uyibeka ngqo elangeni. Lapho izimpande zingamasentimitha ama-2 ubude, zitshale ezimbizeni futhi ngaphandle kwesikhashana iyoba isitshalo sayo
Sika isisekelo se-celery bese uyibeke endishini yamanzi afudumele elangeni. Lapho amahlumela namaqabunga eqala ukukhula enkabeni, kufake ebhodweni elinenhlabathi ukuze likhule kangcono.
I-Romaine ulethisi noma i-endive
Beka i- I-lettuce yamaRoma iqhuma esitsheni esingu-XNUMX/XNUMX sentimitha amanzi, ukuwugcwalisa kuze kube uhhafu wesentimitha. Ngemuva kwezinsuku ezimbalwa, izimpande neziqu ezintsha zizovela futhi zingafakwa emhlabathini.
Izingongolo ze-Coriander izokhula lapho ifakwa engilazini yamanzi. Lapho izimpande sezinde ngokwanele, zitshale ebhodweni egumbini elikhanyiswe kahle.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuvuselelwa Okuhlaza » I-Ecology » Ezolimo zemvelo » Imifino engu-8 engakhula ibuye ngokulandelana
I-deep-sea fishing, iFrance isolwa ngokuqamba amanga
Amathiphu wokuwasha izingubo ngaphandle kokungcolisa